Fanampian’ny Banky iraisam-pirenena (CPP)*: 50 % fanomezana, 50 % trosa tsy misy zana-bola | NewsMada
Nampahafantarina, omaly, ny fankatoavan’ny filankevi-pitantanan’ny Banky iraisam-pirenena ny fiaraha-miasa vaovao eo amin’i Madagasikara sy ity mpamatsy vola ity (CPP). Nanatrika ny fotoana fampahafantarana izany, ny minisitry ny Toekarena, Raveloharison Herilanto ; ny minisitry ny Fitantanam-bola, Andriambololona Vonintsalama, sy ireo avy amin’ny sehatra maro.
Fiaraha-miasa manomboka ny taona 2017 hatramin’ny 2021, novolavolaina sy nakan-kevitra tamin’ny fitondram-panjakana malagasy sy ny sehatra hafa, araka Drafitrasam-pirenena ho an’ny fampandrosoana (PND). Famatsiam-bola amin’ny alalan’ny IDA, homen’ny Banky iraisam-pirenena : 50 % fanomezana, 50 % trosa tsy misy zana-bola, haverina ao anatin’ny 38 taona, mety miampy fanalavam-potoana enina taona. Kendrena manokana hisy akony any amin’ireo sokajin’olona mahantra, handraisan’izy ireo anjara feno amin’ny asa fampandrosoana, sy hitarika fampiasam-bola avy amin’ny tsy miankina.
Vonona hamatsy 1,3 miliara dolara ny Banky iraisam-pirenena, araka ny tapaka tany Paris, desambara 2016, amin’ny asa fanavaozana rehetra sy amin’ny sehatry ny fambolena, angovo, sosialy. « Isaorana ny Banky iraisam-pirenena amin’izao fanavaozana ny fiaraha-miasa izao ho fandraisan’ny rehetra anjara feno hiadiana amin’ny fahantrana. Mitaky fitantanana tsara fototra sy matanjaka izany eo amin’ny lafiny toekarena sy politika », hoy ny minisitry ny Toekarena, Raveloharison Herilanto.
Ady amin’ireo mampisongadina ny fahantrana
Ao anatin’io CPP io ny tokony hahitana fampandrosoana marina mipaka any amin’ny vahoaka. Tanjona, alohan’ny 2021, ny hampihena isan-taona ny ankizy tsy ampy sakafo ; hampitombo 25 % ny ankizy mahavita fianarana ambaratonga voalohany ; ary hampiakatra avo roa heny ny tahan’ny fahazoana herinaratra. Anisan’ny singa mampisongadina ny fahantrana eto Madagasikara ireo naroson’ny Banky iraisam-pirenena ireo. “Tokony ho hita taratra ny fiarovana ny maro anisa mahantra manoloana ny loza voajanahary sy fiovan’ny toetr’andro », hoy ny solontenan’ny Banky iraisam-pirenena, Coralie Gevers.
Hisian’ny fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana feno sy maharitra, tsy maintsy kajina hanana ny hoaviny azo antoka, manomboka amin’ny fahatanorany, ny mponina. Afaka miasa ara-dalàna, fampiasam-bola mametraka fotodrafitrasa matanjaka, tontolon’ny fihariana azo antoka, ho an’ny orinasa madinika na salantsalany. Ilaina, araka izany, ny fampiharana marina ny fitsinjaram-pahefana.
CPP* : Cadre de partenariat pays.